Kedu ka m ga esi eji akara azụmaa asọmpi maka uru nke onwe m?
O doro anya na nnukwu ibu nke ụwa na-agwa anyị na isi ihe ndị dị na algorithm bụ isi na-elekwasị anya na ọdịnaya dị elu nke na-enye ezigbo onye ọrụ. Enweghị obi abụọ, ọdịnaya ahụ ka bụ eze. Ka o sina dị, ntanetị njikọ njikọta nke weebụsaịtị ọ bụla bụ nke abụọ kachasị mkpa maka Google. Ọ bụ ya mere ọ dịghị mkpa iji kwuo na azụlinks dị mma bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke echiche nke oge a bụ Search Engine Optimization - umzugs transporter mieten. Ekwuru m na ime ihe ọjọọ na profaịlụ backlink gị agaghị adaba naanị iji nweta ihe ọ bụla nwere ike ịchọta ma ọ ga-ewute gị na ọganihu gị ugbu a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na Google na-enyo enyo na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog na ịghọ aghụghọ ule, ọ nwere ike ọbụna imebiga ihe ókè mgbe ihe niile mejupụtara deindexing site na nsonaazụ ọchụchọ otu ugboro na ruo mgbe ebighi ebi (ma ọ bụ nke a, mmachibido iwu na mmachibido iwu). Ọ bụ ya mere ị ga-eji nyochaa akara azụmaahịa nke ndị na-asọmpi - ya na uru ha kachasị mma na nnukwu nsogbu dị iche iche - ga - abụ mkpebi dị mma nke ịkwesịrị iji mee ka usoro ụlọ ọrụ kachasị dị nchebe. M ga-egosikwa gị otu esi enyocha ndị nkwado gị na-asọmpi. Ya mere, n'okpuru ebe a bụ ụzọ atọ dị mfe iji mee nchọpụta kwesịrị ekwesị ma mee ka ọ bụrụ ihe kachasị na ndị ahịa gị.
Chọpụta Ndị Mmegide Niche gị
Tupu ị nyochaa ndị nkwado ọ bụla, ị ga-achọpụta ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma nke ndị mmegide dị nso na-ere ahịa n'ahịa, ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ gị. Ọrụ ahụ bụ nnọọ ihe a na-ejikarị arụ ọrụ, nke ị nwere ike iche. Ma m, m na-eme ihe ngwa ngwa ma mụọ mmeri na ọdịda nke ndị na-agba m tupu oge. Ebumnobi, ịmata ndị ahịa gị ahịa kwesịrị ime ogologo oge tupu gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog ga-adị ndụ. Ka o sina dị, ugbu a, ọ bụ oge dị elu ị malitere iji ọsọ na-agba ọsọ nyocha iji mee ka ndị na-akwado ndị na-asọmpi kacha mma maka uru onwe gị. Amaghị ebe ị ga-amalite? Ana m akwado iji Serpstat, ngwá ọrụ na-enweghị ntanetị na-enyere m aka ịghọta ọtụtụ ndị iro m. N'igbu ya n'asụsụ Bekee, ị nwere ike iji ngwá ọrụ a chọpụta ebe nrụọrụ weebụ nke ndị mmeri gị nke ọma. N'ileba anya na ọnụọgụgụ nke mkpụrụokwu, nkezi nke saịtị ahụ, na eziokwu ahụ nke ọma, ị ga-aghọta ebe ị ga-amalite.
Mara Your Main Zaa
Akacha, PA (page ikike), DA (ngalaba ikike), nakwa dị ka PR (page n'usoro) bụ isi Njirimara nke ọ bụla website si backlink profaịlụ. O doro anya na ebumnuche gị bụ inwe akara kachasị elu ya bụ na metric atọ ndị a. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-amarakwa ihe ndị na-esonụ - ọnụ ọgụgụ nke ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ na ọnụ ọgụgụ (na-ekwu na peeji nke na ngalaba), na nnukwu foto nke ihe odide arịlịka maka SEO (ọnụ ọgụgụ, nkesa, na iche iche nke isiokwu, , na ihe ndị ọzọ dị egwu).
Nyochaa Onyinye Egwuregwu Ịgba Ọsọ
N'ezie, ọ dịghị usoro eluigwe na ala maka ịga nke ọma. Ka o sina dị, n'iji ngwaọrụ nyocha iji nweta nghọta miri emi banyere ndị na-agba ọsọ gị asọmpi bụ ụzọ kachasị mma isi nọrọ n'ahịa ahịa. Ya mere, ị ga-achọ nyocha asọmpi maka ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla nwere profaịlụ njikọ kwesịrị ekwesị dị n'elu nchọpụta dị mkpa. N'ụzọ dị otú ahụ, ana m akwado ịnwa otu n'ime ihe ndị na-esonụ search analysis - Mepee Site Explorer (Moz), Nchịkọta Ụtọ, Frog Frog, ma ọ bụ Ahrefs - M nwara ha niile. Ma, m, Otú ọ dị, ọrụ kachasị nke ọrụ ha dị nnọọ nha, ọbụlagodi na ọtụtụ njirimara a haziri ahazi na ihe ntanetị dị elu nke nchịkọta (Semalt) na Open Site Explorer (Moz). Ya mere, ọ bụ naanị gị ka ị ga-ekpebi nke ị ga-ebu ụzọ mee. Ozugbo i jidere nghọta ziri ezi, ihe niile ị chọrọ bụ iji mee ka ndị na - emegide gị dị ike, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala nweta nghota zuru oke nke usoro njikọ njikọ na niche gị.